Posted by zizawa ⋅ 05/02/2011	⋅3Comments
ဒတ်ချ လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာ တဦးတယောက်က တသင်း တဖွဲ့ထက် ချွန်ထွက်နေတာကို အားမပေးဘူးလို့ ပြောတယ်မလား၊ horizontal soceity ဆိုပြီး ပြောတယ်မလား။ အဲဒိကနေ ဆက်စပ်မိပြီး တသင်းလုံးတက်၊ တသင်းလုံးဆင်း co-ordination ကောင်းကောင်းနဲ့ ကစားတဲ့ တိုတယ်ဖွတ်ဘောရဲ့ ပုံစံဟာ သူတို့ရဲ့ လူနေမှု ပုံစံကနေ ဆင်းသက်လာတာ နေမှပေါ့လို့ ပြောမိတာ။ well this is just an assertion, i’ve got nothing to substantiate it.🙂
Posted by ၀တုတ် | 05/02/2011, 21:06 Reply to this comment	sorry, it’s ‘brilliant orange’, not beautiful.
Posted by ၀တုတ် | 05/02/2011, 21:13 Reply to this comment	Amsterdam!
I heard weed is legal there.😛
Posted by blackpirate | 06/02/2011, 10:51 Reply to this comment	LeaveaReply Cancel reply	Enter your comment here...